Barakacayaal Cadaado ku sugan oo sheegay in la illaaway
Photo | Barakacayaasha Adado/Sawir/Diirshe/Ergo
21 June, 2013 GALGADUUD
Ku dhowaad 150 Qoys oo barakacayaal ah kuna nool kaam lagu magacaabo Iftiin oo ku yaal bariga magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa ka cabanaya xaalad hoy la`aan ah oo soo wajahday, kadib markii roobabkii xoogganaa ee Guga ay ka baabi'iyeen guryihii ay degganaayeen oo ka samaysnaa buushash iyo iyo cooshado.
Xaliimo Yuusuf Wehliye oo ka mid ah haweenka kaamkaasi in muddo ah ku noolaa ayaa raadiyaha Ergo u sheegtay in hoy la'aan ay soo wajahday bishii ugu dambeysay, iyadoo qoysas badan ay iskula hoydaan hal guri oo baco iyo baakado laga sameeyay.
Roobabka ayaa dumiyay musqulo uu lahaa kaamkaasi, waxaana taasi ay keentay nadaafad darri ay cudurro ka dhalan karaan sida ay sheegayso Salaado Axmed Maxamuud oo iyana ka mid ah haweenka kaamkaasi ku jira.
Qoysaskan ayaa 2dii sano ee la soo dhaafay deegaansanayay kaamkan ku yaal duleedka bari ee magaalada Cadaado, halkaasoo duruuf kala duwan ay isugu keentay, Nuur Cusmaan Ciid horjoogaha Kaamkan ayaa sidaasi Ergo u sheegay, waxaana uu ka codsaday hay'adaha samafalka iyo bulshada Soomaaliyeed in qoysaskan laga taageero cunnada iyo hoyga oo ah baahida ugu weyn oo ay hadda ka cabanayaan.
Qoysaskan ayaa isugu jira xoolo dhaqato ku cayroobay abaartii 2011da ka dhacday Soomaaliya iyo kuwo colaado kaga soo hayaamay gobollada koofureed ee dalka, waxayna degganaayeen wixii ka dambeeyay sanadkii 2011kii magaalada Cadaado, mana jirto hay'ad samafal oo nolosha ka saacidda sida ay sheegeen.